Badbaadada Dunida oo dhan, Kaniisadda Adduunka ee God Switzerland (WKG)
Waagii Ciise ku dhashay Beytlaxam in ka badan 2000 sano ka hor, waxaa jiray nin cibaado leh oo magiciisa la odhan jiray Simecoon oo degganaa Yeruusaalem. Ruuxa Quduuska ah ayaa u muujiyey Simecoon inuusan dhiman doonin ilaa uu arko Masiixa Rabbi. Maalin maalmaha ka mid ah Ruuxa Quduuska ah ayaa Simecoon u kaxeeyey macbudka isla maalintaas waalidku waxay keeneen ilmaha Ciise si uu uga soo baxo shuruudaha Tawreed. Simecoon goortuu arkay ilmihii, ayuu gacmihiisa ku qabtay Ciise, oo Ilaah ammaanay oo yidhi, Sayidow, hadda addoonkaagii waad nabad gelisay sidii aad tidhi. waayo, indhahaygu waxay arkeen Badbaadiyeheenna, oo aad dadka aad hortooda u diyaarisay, inuu iftiin u noqdo quruumaha, iyo qiimaha dadkaaga reer binu Israa'iil. (Luukos 2,29-32).
Simeon wuxuu Ilaah ku ammaanay waxa culimmada, Farrisiinta, wadaaddada sare iyo macallimiinta sharciga aysan garan karin: Masiixa reer binu Israa'iil uma imaan badbaadinta reer binu Israa'iil oo keliya, laakiinse wuxuu kaloo u badbaadiyey dadka adduunka oo dhan. Isayos hore buu sii sii sheegay oo wuxuu yidhi, Adigu waxaad tahay addoonkayga inaad ku kor kacdo qabiilooyinka reer Yacquub, oo aad u kala soocday kuwa kala firidhsan oo reer binu Israa'iil, laakiinse waxaan adiga kuu dhigay iftiinka quruumaha inaad tahay badbaadadayda ilaa ugudambaysta. dhulka (Ishacyaah 49,6). Ilaah baa reer binu Israa'iil uga yeedhay dadka oo wuxuu iyaga uga soocay inay noqdaan hantidiisa dadka iyagoo axdi leh. Laakiin isagu uma uu samayn iyada oo keliya; ugu dambayntiina wuxuu u sameeyey badbaadinta dadka oo dhan. Markuu dhashay Ciise, malaa'ig baa u muuqatay koox adhijirro ah oo adhigooda dhawra habeenkii.
Rabbiga ammaantiisii ​​ayaa soo muuqatay, oo malaa'igtii baa ku tidhi,
Ha cabsan! Bal ogaada, waxaan idiin sheegayaa farxad weyn oo dadka oo dhan u imaan doonta, waayo, Badbaadiye wuxuu idiinku dhashay maanta, kaasoo ah Masiixa Rabbiga ee magaalada Daa'uud. Taasna waxay astaan ​​u tahay: waxaad ka heli doontaa cunugga oo ku duuban xafaayadda oo ku jiifa sariirta. Oo markiiba waxaa ag joogay ciidan fara badan oo jannada la jira malaa'igtii Ilaah ammaaneen oo waxay yidhaahdeen, Ilaah ha ku ammaanmo meelaha ugu sarreeya, nabadgelyada dushiisana dadyowga doonistiisa wanaagsan. (Luukos 2,10-14).
Markii uu sharraxay baaxadda wixii Ilaah ku sameeyey Ciise Masiix, Bawlos wuxuu qoray: waayo, Ilaah waa ka farxay in wax walba oo isaga dhex jooga ay ahaato isaga, iyo inuu wax kasta oo isaga la jira la joogo, ha ahaato dhulka ama jannada,. Nabadda waxaa laga sameeyay dhiigiisa iskutallaabta dusheeda (Kolosay 1,19: 20). Sidii uu reer Simecoon macbudka ugu wacdiyey Ciise oo wiilkiisa ku dhashay, badbaadada ayaa dunida oo dhan gaadhay, iyo dambiilayaasha oo dhan, iyo xataa cadaawayaasha Ilaah oo dhan.
Bawlos wuxuu warqad u qoray kaniisadda ku taal Rome:
Sababtoo ah Masiixu wuxuu innaga dhintey markii aan weli itaal yaraana. Imminka qofba qof ayaa u dhinta sabab uun awgeed; laga yaabee wanaag awgeed inuu nolosha ku darsado. Laakiin Ilaah wuxuu ina tusiyaa jacaylkiisa uu inoo qabo xaqiiqda ah in Masiixu innaga u dhintay markaan weli dembilayaal ahayn. Bal intee in ka badan buu naga sii cadhaysiin doonaa cadhada haatan inaan xaq ku noqonno dhiiggiisa! Maxaa yeelay haddii aan Ilaah kula heshiinnay dhimashadii wiilkiisa markii aan weli cadowgii ahayn, intee in ka sii badan ayaa nolosheenna badbaadin doonnaa hadda kadib markii aan heshiisiinno (Rooma 5,6-10). In kasta oo ay Israa’iil ku guuldaraysatay inay dhawrto axdigii Ilaah iyaga la dhigtay iyo in kasta oo ay dembiyadii kuwa aan Yuhuudda ahayn dhammaantood sameeyeen, Ciise Masiix ayaa ku dhammaystiray wax kasta oo lagama maarmaan u ah badbaadinta dunida.
Ciise wuxuu ahaa Masiixa la sii sheegay, wakiilka kaamilka ee dadka axdiga ah, sidoo kale wuxuu u yahay iftiinka quruumaha, kaas oo reer binu Israa'iil iyo dadka oo dhan laga badbaadiyey dembiga oo la keenay qoyska Ilaah. Taasi waa sababta Kirismasku ay tahay waqti loogu dabaaldego hadiyadda Ilaah ugu weyn dunida, hadiyadda wiilkiisa keliya, Sayidkeenna iyo Badbaadiyeheenna Ciise Masiix.